मनमाथिको नियन्त्रण ः कसरी सम्भव छ ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मनमाथिको नियन्त्रण ः कसरी सम्भव छ ?
‘पूmलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार’— हामीले निर्माण गरेको संसारका पछाडि केवल हाम्रै हात हुने दर्शन प्रस्तुत गीतको अंशले बोलेको छ । जसको हृदय कोमल छ, उसले सबैलाई आपूmजस्तै कोमल र सहज देख्दछ । जसको हृदय कठोर छ, उसले अरुलाई पनि कठोर देख्दछ । एउटै व्यक्ति पनि पूmलजस्तै कोमल भावना भएको व्यक्तिका दृष्टिमा कोमल देखिन्छ भने काँडाजस्तै भावना भएको दृष्टिमा कठोर देखिन्छ ।
यसरी, एउटै व्यक्ति पनि दुई थरीको देखिँदो रहेछ । व्यक्ति दुई थरी देखियो, किनकि उसलाई हेर्ने दुई थरी मानिस थिए । दुई थरी मानिसले दुई थरी विचार धारण गरेका थिए, त्यसैले एउटै व्यक्ति दुई थरीको देखिन बाध्य भयो । यस प्रकार, के स्पष्ट हुन्छ भने कुनै पनि मानिस वा विषय आपैmँमा गुनी वा बैगुनी भन्ने हुँदोरहेनछ । व्यक्तिभित्रको गुन र बैगुनको सापेक्षमा मानिस असल वा खराब देखिँदो रहेछ ।
संसार जेजस्तो छ, त्यसलाई त्यसरी नै हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । जेजस्तो छ, त्यसलाई त्यसरी नै हेर्ने दृष्टिलाई नै योगदृष्टि भनिन्छ । त्यही योगदृष्टि नै बोध हो । मानिसले पाएको समस्त प्रकारको दुःखको कारण नै जस्तालाई त्यस्तै बुझ्न, जान्न र हेर्न नसक्नु हो । उसले जे छ, त्यसलाई कि त बढाएर हेर्दछ, कि त घटाएर हेर्दछ । उसले आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहका आँखाले हेर्दछ । मानिसहरुसँग अनेक प्रकारका पूर्वाग्रह र चिन्तनहरु छन् । तिनै पूर्वाग्रह र चिन्तनका आधारमा नै एउटै व्यक्ति पनि अनेक देखिने हो ।
मनुष्यको कर्तव्य भनेको जहिले पनि आपूmलाई विवेकसङ्गत तुल्याउनु हो । हाम्रो दृष्टिलाई अनेकन आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिबाट मुक्त राख्नु हो । यस्तो प्रकारको स्वतन्त्र र मुक्त दृष्टि भएको व्यक्ति सत्यको नजिक हुन्छ । विज्ञानको नजिक हुन्छ । यस्तो मुक्त र स्वतन्त्र दृष्टि भएको व्यक्तिबाट कसैको पनि अहित हुँदैन, किनकि उसले जस्तालाई त्यस्तै देख्दछ ।
हामीले पाएको दुःख वास्तवमा केही पनि होइन । दुःख त केवल मान्छेको मनले बनाएको काल्पनिक अँध्यारो मात्र हो । हामीले विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न तरिकाले बुझ्दछौँ । अनेक शङ्का÷उपशङ्काका दृष्टिले हेर्दछौँ । तर, त्यसरी अनुमान गरेको व्यक्ति हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन । एक जना मानिसको मनले एउटा वास्तविक विषयमाथि अनेकन आग्रहका रङ चढाइदिन्छ । संसारभरि सबै मान्छेले यसरी नै अनेकन आग्रह र पुर्वाग्रहका रङ खन्याउँदा खन्याउँदै त्यो विषयले आफ्नो वास्तविकता नै गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यसैले, संसारलाई उसकै रुपमा हेर्न र बुझ्न मानिसले आफ्नो मनको कल्पनालाई घटाउनुपर्दछ । मनको बानी जहिले पनि अनेक आग्रह र पूर्वाग्रहका पछि कुदिरहने किसिमको हुन्छ । यही मनले हामीलाई अनेकतिर लिएर जान्छ । कहिले उचाल्छ, कहिले पछार्छ । यसको अर्थ मनले सधैँ नराम्रै मात्र गर्छ भन्ने होइन । तर धेरै नराम्रो गर्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि मनको स्वभाव चञ्चल हुन्छ । चञ्चलता राम्रोभन्दा नराम्रो धेरै गर्ने वृत्ति हो । हामीले हाम्रो विवेकलाई मनमाथि लगाएर मन शान्त हुने अवस्थामा भने यो हाम्रो सबैभन्दा प्रिय मित्र पनि बन्न सक्दछ ।
‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’— मन नै बन्धन र मुक्तिको कारण हो भनेर गीतामा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई हामीले प्रयोग ग¥यौँ भने हामी मुक्तियात्राका पथिक हुन सक्दछौँ, तर यसले हामीलाई प्रयोग ग¥यो भने हामी बन्धनमा पर्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले, हामी मनका पछिपछि लुरूलुरू दौडिनु हुँदैन । मन हामीले भनेबमोजिम चल्नुपर्दछ । हामीले भनेका मान्न थाल्यो भने मनका कारण हामीले सुखमय जीवन बाँच्न पनि सक्दछौँ, तर यसकै पछाडि कुदिरहने हो भने हामी गरिब, अस्वस्थ र दीनहीन बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ ।
मनोविद्हरुले पनि मनमा धेरै कुरा नखेलाउनू भनेर सम्झाउने गर्दछन् । जति मन बाहिर दौडियो, त्यति नै हामी थकित हुन्छौँ । आजको मानिसले लगभग सधैँजसो मनका कारण उत्पन्न हुने थकाइ महसुस गरिरहेको हुन्छ । कुनै काम पनि गरेको छैन, यात्रा पनि गरेको छैन, भारी पनि बोकेको छैन, तापनि व्यक्ति निकै थकित भएजस्तै खुइ्इ्य खुइ्इ्य गरिरहेको हुन्छ । यसको कारण के हो भने व्यक्तिको शरीर एक ठाउँमा भए पनि मन दस ठाउँमा छ । मन दौडिइरहेको छ, अनेक विषयहरुमा । कहिले शङ्का÷उपशङ्कामा । कहिले डर÷त्रासमा । कहिले हत्या÷हिंसामा । कहिले लडाइँ÷झगडामा । भित्रको मनको उछलकुदले बाहिर पनि व्यक्ति थकित देखिएको हुन्छ ।
संसारमा हामीले सोचेजस्तो डर, त्रास, हत्या, हिंसा केही पनि छैन । न त हामीले सोचेजस्ता डरलाग्दा मानिसहरु छन् । त्यस्तो बनाइएको मात्र हो । बेलुनमा हावा भरेजस्तै हामीभित्रको मनले चाहिँदा नचाहिँदा डर, त्रास, हत्या, हिंसा, आदि इत्यादिको हावा भरेर हामीलाई उडुवा बनाइदिएको छ । मनको यो बदमासी हो कि इमानदारी, हामीले छुट्याउन सकेनौँ । यहीँनेर समस्या छ ।
जहाँ हामीले टेकेका छौँ, त्यहीँ उभिएर एक पटक चारैतिर नजर घुमाऔँ । दायाँबायाँ, पूर्वपश्चित, उत्तरदक्षिण, तलमाथि सबैतिर हेरौँ । हामीले कतै पनि नराम्रो देख्दैनौँ । चराचुरूङ्गीहरु चिरबिर–चिरबिर चिरबिराइरहेका छन् । वरपर बोटबिरूवाका पातहरु मस्तसँग हावामा झुलिरहेका छन् । बगैँचामा पूmलहरु फुलिरहेका छन् । आकाश सफा र स्वच्छ छ । बादलै लागेका भए पनि एकछिन पछि हटेर गइहाल्छ । नदी आफ्नै सुरमा सागरतिर बगिरहेको छ । आकाशमा सूर्यचन्द्रको प्रकाश जारी छ । उत्तरतिर फर्किएर हेर्दा स्वच्छ र निर्मल मुस्कुराइरहेका पवित्र हिमशिखरहरु देखिन्छन् ।
खै, कहाँ छ नराम्रो प्रकृतिमा ? खै, प्रकृतिले कहिले हामीलाई दुःख दिएको छ ? कहिलेकाहीँको प्रकोपलाई छोडिदिने हो भने सबैतिर आनन्दै आनन्द छ । सौन्दर्य नै सौन्दर्य छरिएको छ । नराम्रो छ भने केवल हाम्रो मनमस्तिष्कमा छ । कुरुपता छ भने हामीभित्रै छ । हामीले नै पालेर राखेका छौँ मनको चिडियाखानामा आपैmँलाई खाने बाघ, भालु, चितुवा, बिच्छी र सर्पहरु, गोही र गोमनहरु ।
आजको समाजमा हत्या, हिंसा, भय, त्रास, अविश्वास र अनैतिकता आदि बढेर जानुमा हाम्रो मनको अवस्था नै जिम्मेवार छ । आजको मान्छेको मन नै विकृत भएको छ । प्रत्येक व्यक्ति मनको चञ्चलताको दास भएको अवस्था छ । हामी पनि कुनै न कुनै मान्छेको साथ नपाई बस्न सक्दा पनि सक्दैनौँ । हामी जो–जसको सम्पर्कमा पुग्दछौँ, ती पनि अधिकांश मनलाई व्यवस्थित गरेका लगभग हुँदैनन् । हामी जसका कुरा सुन्छौँ, उसले पनि हामीलाई नराम्रै सुनाइरहेको हुन्छ । टेलिभिजन हे¥यो, मनलाई भाँड्ने दृश्यबाहेक केही पाउँदैनौँ ।
रेडियमा पनि आपसी झगडा, वैरभाव र प्रतिशोध बढाउने सामग्रीको आधिक्यता सुनिन्छ । पत्रपत्रिका पढ्यो, नकारात्मकता हावी भएको पढिन्छ । इमेल, इन्टरनेट हे¥यो, अश्लीलताको अभ्यासले स्थान पाएको छ । फेसबुक, ट्वीटर जता हे¥यो, त्यतै नकारात्मकता अभिवृद्धि गर्ने सामग्रीहरुको प्रकाशन र अभिव्यक्ति भेटिन्छ । यसरी हेर्दा, जति पनि स्रोतहरु छन् हाम्रो मनका, ती सबैले नराम्रो सन्देश मात्र प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि मन यति विचलित भएको हो, आजको मानिसको ।
विचलित मनकै कारण आजको मानिस विचलित भएको हो । मानिस बनेकै मनबाट हो । मनलाई जति सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ र सकारात्मक बनाउन सक्यो, त्यो त्यति नै सकारात्मक, स्वच्छ र निर्मल बाँच्न सफल बन्दछ । तर, मनलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा सजिलो भने छैन । मनलाई चञ्चलभन्दा चञ्चल बनाउने काम हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौँ । मनले चञ्चलताको संस्कार पाइसकेको छ । यसैले, यसलाई तत्काल शान्त र धीर बनाउँछु भनेर भन्न सकिँदैन । हाम्रो मन बाहिरी विषयहरुमा नराम्रोसँग फसेको छ । हामी बाहिरी विषयमै अभ्यस्त भएका छौँ । अँध्यारोमा बस्नुपर्दा हामीलाई पीडाको महसुस हुन्छ, किनकि हामी जतिखेर पनि उज्यालोमा बसिरहेका छौँ । एकान्तमा बस्नुपर्दा पनि हामीलाई पीडा र छटपटी हुन्छ, किनकि हाम्रो मनले एकान्तमा विषय पाउँदैन भनेजति, त्यसैले । त्यस कारण, मनलाई तालिम दिने उपाय भनेको नै आँखाले नदेखिने विषयमा यसलाई लगाउनु हो । विषयहरुबाट मनलाई मुक्त गर्नु हो । अथवा, विषयहरुमाथि मनलाई लगाउनै परे पनि सकारात्मक विषयमा लगाउनुपर्दछ ।
हामीले मनलाई दिने विषयहरु हाम्रो जीवनका शाश्वत् सत्यसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । मनले जे पाउँछ, सत्य मात्र पाओस् । सकारात्मकता अभिवृद्धि गर्ने सामग्रीमा मनलाई बारम्बार लगाउँदालगाउँदै अन्ततः हामी भित्रैदेखि सकारात्मक बन्न सुरू गर्दछौँ । त्यसैले, सत्सङ्ग गर्दा पनि मनलाई शान्ति हुने, धेरैतिर नदौडिने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यो कुरा सजिलो छैन । यसको अर्थ मनलाई संयममा राख्ने कुरा सम्भवै छैन भन्ने पनि होइन । गाह्रो छ भन्ने मात्र हो ।
गाह्रो पनि किन भएको हो त भन्दा हामीले नराम्रा विषयमाथि मनलाई दौडाइरहने अभ्यास लामो समयसम्म गरेकाले मात्र हो । हामीले नराम्रा विषयको चिन्तन गर्ने संस्कार बनाएका हुनाले नै यसलाई सकारात्मक विषयमा केन्द्रित गर्ने कुरा अप्ठ्यारो भएको मात्र हो । तर, असम्भव अवश्य छैन । कुनै पनि काम गाह्रो र सजिलो भन्ने नै हुँदैन । हाम्रो अभ्यास र संस्कारका आधारमा हामीले गर्ने काम सजिलो र अप्ठ्यारो हुने गर्दछ ।
सानैदेखि मनलाई सकारात्मक, शान्त र स्वस्थ विषयमा मनलाई लगाउने मान्छेका लागि मनलाई संयममा राख्ने कुरा जति सजिलो हुन्छ, सानैदेखि गलत र नकारात्मक चिन्तनको संस्कार बनाएको व्यक्तिका लागि त्यति नै अप्ठ्यारो हुन्छ । अर्जुनले घर, परिवार, समाज, इष्टमित्र आदि इत्यादि नै सधैँसधैँ रहन्छन् भन्ने चिन्तनमा चित्तलाई लगाएका हुनाले उनीहरुको मृत्यु हुने कुराले भ्रमित हुन पुग्दछन् । अर्जुनजस्ता महापुरूषका लागि पनि मनमाथिको संयम हावालाई समात्नुसरह भयो । त्यसैले, कृष्णसँग भने—
चञ्चलं हि मनः
कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्
हे कृष्ण, मन अत्यन्त चञ्चल, भित्रैदेखि हल्लाउने, दृढ र बलवान् छ । यसैले, यसलाई वशमा राख्ने कुरा त चलिरहेको वायुलाई रोक्नुजस्तै अत्यन्त अप्ठ्यारो पो हुँदोरहेछ !’
जवाफमा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो–
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम्,
अर्जुन, तिमीले भनेजस्तो निःसन्देह रुपमा मन चञ्चल र अत्यन्त कठिनतापूर्वक वशमा गर्नुपर्ने खालको छ, तर पनि अभ्यास र वैराग्यका बलमा भने यसलाई वशमा गर्न सकिन्छ । भगवान् श्रीकृष्णका अनुसार मनमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने कुरा सामान्यतया सजिलो छैन । तर, अभ्यासले र वैराग्यले भने यसलाई सहजै नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।
अभ्यास भनेको त्यही संस्कार हो । अथवा यसो भनौँ, संस्कार भनेका लामो समयसम्म गरिएको एउटा अभ्यास हो । हामीले आजैदेखि सत्चिन्तनको अभ्यास गर्न सुरू ग¥यौँ भने अन्ततः मन शुद्ध र पवित्र हुन थाल्दछ । अभ्यास पहिलो दिनमै पूरा हुन्छ भन्ने होइन । यसले त लामो समय लिनुपर्ने पनि हुन्छ । हामीले दैनिक अभ्यास गरेका छैनौँ भने पहिलो दिन प्रातः भ्रमण गर्दा गोडा र पैताला गलेर फतक्क हुन्छन्, किनकि त्यसअघिसम्म हामीले त्यसरी हिँड्ने गरेका थिएनौँ । भोलिपल्ट पनि दुख्छ । पर्सिपल्ट अलि कम हुन्छ । त्यसपछि क्रमशः बानी पर्दै जान्छ र जति हिँडे पनि नदुख्ने र गोडा नगल्ने हुन्छ ।
बारम्बार मनमाथि ध्यान दिनुप¥यो । मनले नकारात्मक विषय नपाओस् । जहिले पनि हामी सकारात्मक चिन्तनका लागि उपयुक्त वातावरण भएको ठाउँमा त्यस्तै प्रकृतिका मानिससँग सङ्गत गरौँ । त्यस्तै किसिमका पुस्तकहरुको अध्ययन गरौँ । योग र प्राणायाममा सहभागी बनौँ । नराम्रा साथीहरुको सङ्गत छाडिदिऊँ । अर्काको टीकाटिप्पणी भइरहेको ठाउँमा सकेसम्म नबसौँ । जहाँ राम्रोका बारेमा चर्चा भइरहेको छ, मानिसहरु सकारात्मक ऊर्जाले ओतप्रोत भएका छन्, त्यस्तो वातावरण सकेसम्म नछुटोस् । जब यसरी बारम्बार सकारात्मकताको चिन्तन र अभ्यासको अवसर जुट्दछ, मन स्वयम् स्थिर र शान्त हुन पुग्दछ । यो अभ्यासको कुरा भयो । वैराग्य मनमानि विजय हासिल गर्ने अर्को उपाय हो, श्रीकृष्णका अनुसार । वैराग्य भनेको निराशा होइन । वैराग्य भनेको संसार र सांसारिक विषय–पदार्थप्रतिको अति मोहबाट मुक्तिको अवस्था हो । हामीले जब मन कुनै भौतिक विषय र पदार्थमा केन्द्रित हुन पुग्दछ, तब हामीले के सोच्नुपर्दछ भने हे मन, तँ जुन विषयप्रति यतिधेरै आसक्त भएको छस्, त्यो लामो समय रहन्छ नै कहाँ र ? त्यो त एकछिनको रामछाया मात्र हो । यो नाश भएर जान्छ । यसरी सांसारिक विषय र सामग्रीको व्यर्थताको चिन्तनका माध्यमले मनको अनेक विषयतिर आँखा चिम्लिएर दौडिने रोग समाप्त हुन्छ । ऊ त्यसपछि विश्रामको अवस्थामा पुग्दछ ।
यसरी, हामीले मनलाई शान्त, स्थिर र सुशील बनाउन सक्दछौँ । जुनदिन मन शान्त हुन्छ, त्यसदिन हामी पनि शान्त हुन्छौँ । जुनदिन हामी शान्त हुन्छौँ, त्यसदिन बिस्तारै यो मनुष्य समाज पनि शान्त हुँदै जान्छ । यसैले, आजको आवश्यकता भनेको मनको दौड समाप्त गरी यसलाई शान्त तुल्याउनु हो । कुनै पनि विषयले मनको धैर्य खोस्न नपाओस् । हरेक व्यक्तिले मनलाई सम्हाल्ने बित्तिकै समाज पनि स्वतः सम्हालिएर जान्छ । यसैले आउनुस्, मनलाई सम्हालौँ र समाज सम्हाल्ने काममा सहयोग पु¥याऔँ ।